Thursday, 30 September 2010 - Posted by Shwe Thiri Khit
Today I would like to share with you that I'm openinganew online shop. Click this link http://shwethirikhit.bigcartel.com/
Print measure on 8.5" × 11" inches Premium Glossy paper. The image is centered on the paper leavingawhite border for framing. All prints are signed and dated by me, the artist. Sales of artwork do not transfer copyrights.
Please Contact Me foracustom order if you would like one that is not listed. The Limited Edition Giclees are printed with the highest quality archival paper and canvas. I only listed5products in this shop but you can also order any pictures and sizes of my main gallery. So feel free to ask me.
For detailed payment and shipping costs, please contact by email: info@shwethirikhit.com and khitster@gmail.com
Here is my youtube video collected my works between 2009 to 2010.
8 cups of tea:
ဆိုင်ကိုသွားကြည့်ပြီးပြီ ၅မျိုးပဲတင်ထားတာလား။ အားလုံး အနီနဲ့ပန်းရောင်အုပ်စုတွေဘဲနော်။ အရုပ်ကလေးလှမ်းယူနေတဲ့ပုံနဲ့ စာအုပ်ပုံပေါ်ရပ်နေတာလေး ကြိုက်တယ်။ သူတို့က A4 size ထဲမှာပဲရတာလား။ အနည်းဆုံး ၁၀လက်မပတ်လည်ဆိုရင်ကောင်းမယ်။ ဘောင်လေးနဲ့ဆို ငါ့အိပ်ခန်းထဲဝင်တဲ့ လှေခါးနံရံမှာ တန်းစီချိတ်ဖို့အတော်ဘဲ။
နီ on 30 September 2010 at 17:49
YOur works are very amazing!!!
Babycorn on 1 October 2010 at 00:40
My sister and me, we are willingly to buy your prints and even more original paintings.. You know my email address right? Please contact me.
Rawa on 1 October 2010 at 10:18
ကျွန်တော်လည်းလိုချင်ပါတယ်ဗျာ။ ပိုက်ဆံအခြေအနေ တော်တော်ကောင်းတဲ့အခါကျမှပေါ့။
အကျော် on 1 October 2010 at 11:08
ပိုက်ဆံနည်းနည်းစုပြီးရင်ဝယ်မယ်နော်... ဟီး special offer ဆိုတော့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ အမရဲ့ original ပန်းချီကားဆိုရင်တော့ နေ့ရောညပါစာမလုပ်ပဲ ပိုက်ဆံရှာမယ်ဆိုမှ ၀ယ်နိုင်မှာ။ ဟီးဟီး ဟို တခေါက်တုန်းကလို giveaway ဆိုလားလုပ်ပါဦး. လွတ်သွားတယ်. တကယ်တော့ printတွေထက် တကယ့်ပန်းချီအစစ်ကိုပိုင်ရမှ အရသာရှိတာနော်။ မိုးတောင်လင်းတော့မယ် အိပ်ပီ....
၀ါဝါ on 1 October 2010 at 11:35
ညီမ ၀ါလေးရေ.. ကျေးဇူးအများကြီးပါ။ အစ်မ အချိန်ပေးပြီးရင်းထားရတဲ့ အနုပညာပစ္စည်းလေးတွေကို ကြိုက်ပြီးတန်းဖိုးထားတဲ့အတွက် တကယ်ကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေဝယ်ဖို့သက်သက်နဲ့တော့ ကိုယ့်စုထားတဲ့ငွေတွေကိုတော့အများကြီးမသုံးလိုက်ပါနဲ့။ အစ်မလည်း ဒါတွေသိလို့ ဈေးကိုတတ်နိုင်သလောက်အမြဲလျော့ပါတယ်။ ဒါကိုယ့်အနုပညာပစ္စည်းကိုဈေးပျက်အောင်လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးရောင်းစားတာမှမဟုတ်တာ။ ကိုယ့်ပန်းချီကားလေးတွေလူတွေလက်ထဲများများရောက်ရင်ကျေနပ်တယ်။ ဒါကြောင့် print တွေကိုဘဲ ဈေးလျော့ပါတယ်။ original painting တွေလိုကြတော့ ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ တကားပဲရှိနေတဲ့အတွက် ထိုက်တန်တဲ့ သူ့ဈေးနဲ့သူပေါ့နော်။ နောက် giveaway ပွဲလေးလည်းအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပါမယ်။
Shwe Thiri Khit on 1 October 2010 at 11:47
မ ရေ ပုံတွေကိုတော.မရွေးရသေးဘူး မနက်ဖန်မှပဲ ဘယ်ပုံယူမယ်ဆိုတာကို မေးလ်ပို.ထားလိုက်မယ်နော်. ဖြစ်နိုင်ရင် original painting ဟာလေးတွေပိုလိုချင်တယ်.ပီးတော. ၄ ပုံစလုံးကို emotional အရမ်းဆန်တဲ.ဟာလေးတွေနဲ. တစ်ပုံနဲ.တစ်ပုံ အရောင် အစပ်အဟပ်တည်.တာလေးတွေဆို A4 မှာ ကြည်.ရတာ အရမ်းအဆင်ပြေမယ်လို.ညီမလေးထင်တယ်..အမ ရဲ.အမြင်ကိုလဲသိချင်တယ်လေ နော် ..
jitpe on4October 2010 at 22:56
Ashin Acara on 28 October 2010 at 00:14